Diesel generating set with John Deere Engine serise
John Deere engine ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး AC alternator ကို Faraday,Watter,Stamford,Marathon,Leroy Somer etc....တွင် အသုံးပြုနေကြပါသည်။
Diesel generating set with China brand Engine serise
ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး AC alternator ကို Faraday,Watter,Stamford,Marathon,Leroy Somer etc....တွင် အသုံးပြုနေကြပါသည်။ Standard SAE engine နဲ့အလှည့်ကျလှည့်ပတ်နိုင်ခြင်း၊Preinstalled သည် အမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်မူနဲ့ တုန်ခါမူကို လျှော့ကျစေနိင်သော ကိရိယာများ ကိုတပ်ဆင်ထားခြင်း၊ one time molded base cold rolled steel ဖြင့် ပုံသွင်းခြင်း၊ သံမဏိအခြေစိုက်လောင်စာကန်စခန်းကို 6-8 နာရီစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အတူ အပြည့်အ၀ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊6610 manual control system၊ Can be upgraded to 6620 automatic control system တို့ကိုလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အပြည့်အ၀ ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့်နိူးဆော်သံ feature ကို shutdown ချကာကွယ်ပေးထားပါသည်။
KAMA diesel gensets KAMA ENGINE +FARADAY ALTERNATOR A, This generator set is with soundproof canopy (silent type). B, The generator set is with base fuel tank. KAMA diesel genset ကို အသုံးပြုမည် ဆိုလျှင် အသံတိတ်စိတ်မူကို ရှိစေနိုင်ခြင်း၊လောင်စာဆီထားရန်သီးသန့်နေရာ ပါရှိခြင်းကြောင့် အသုံးပြုရန် သင့်တော်သော စက်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ထုတ်လုပ်တဲ့ စီးရီးဒိုင်နမိုက အဓိက အားဖြင့်တော့ ကျေးရွား၊ မြို့နယ် အစရှိတဲ့ လျှပ်စစ်မီး မရရှိတဲ့ ဒေသတွေအတွက် ဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးမရှိတဲ့ အိမ်ထောင်စုများအတွက် လျှပ်စစ်အလင်း ရရှိစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးသုံး လျှပ်စစ်မီ ထုတ်လုပ်ပေးသော ဒိုင်နမို ဖြစ်ပါသည်။
ST &amp; STC SERIES AC ဒိုင်နမို
ကျွန်တော်တို့ ထုတ်လုပ်တဲ့ အေစီဒိုင်နမိုက အဓိက အားဖြင့်တော့ ကျေးရွား၊ မြို့နယ် အစရှိတဲ့ လျှပ်စစ်မီး မရရှိတဲ့ ဒေသတွေအတွက် ဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးမရှိတဲ့ အိမ်ထောင်စုများအတွက် လျှပ်စစ်အလင်း ရရှိစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးသုံး လျှပ်စစ်မီ ထုတ်လုပ်ပေးသော ဒိုင်နမို ဖြစ်ပါသည်။
MS မော်တာများကို ပျက်စီးမှု နည်းပါးအောင် အလူမီနီယံ၊ အလွိုင်း Body များဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ အောက်ခြေကိုလည်း ဖြုတ်ရ၊ တက်ရလွယ်ကူရန် တက်ဆင်ထားပါတယ်။ MS မော်တာများကို အမျိုးအစားအလိုက် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြသထားပါတယ်။ MS မော်တာများကို Air-Compressor,Pump, Fan, Medical apparatus and အခြာကိရိယာများနှင့် အသေးသုံးစက်များဖြင့်လည်းတွဲသုံးလို့ ရပါတယ်။
Mitsubishi diesel generator MGS0700B (MG-HC6H) မီးစက်
Features &amp; Benefits: Range of submersible pumps for clean or dirty water. Available in plastic or stainless steel in accordance with the model. Useful for small tanks, machinery rooms and above ground pools. Enables suction of up to5mm of water Layer. Suctions particles of up to5mm in diameter. With 10 m of cable. includes floation switch.Drainage pump for dirty water Suctions particles of up to 35 mm in diameter. With 10 m of cable. includes flotation switch
Mitsubishi diesel generator MGS0900B (MG-HC6J) မီးစက်